မမ ( စ / ဆုံး ) – Grab Love Story
ကျနော့ဘဝမှာ ပထမဆုံး တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အမကြီး
တယောက်အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ ပြောရရင် ကျနော့ လက်ဦးဆရာမကျေးဇူးရှင် ဆိုလည်း မှားမယ်မထင်ဘူး။ သူ့ကြောင့်ဘဲ ကျနော့မှာ ကျွမ်းကျင်အဆင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။
အဲဒီ အမကြီးနာမည်က မမသဲပါ။ ကျနော်တို့ရပ်ကွက်ကိုမမသဲတို့မိသားစုပြောင်းလာကြတာ။ မမသဲတို့က ကျနော်တို့ အိမ်ရှေ့အိမ်က၊ သူတို့အိမ်မကြီးက ခြံနောက်ဘက်မှာ၊ မမသဲက ခြံရှေ့မှာဆိုင်လေးဆောက်ပြီးကုန်စုံဆိုင်ဖွင့်တယ်။ သူတို့အိမ်မှာ မမသဲက အိမ်ထောင်သည် ကလေးတယောက်အမေ။ သူ့ယောက်ကျားက နိူင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလားပဲ ၊ အိမ်မှာ မမသဲတို့ အဖေအမေရယ် မောင်တစ်ယောက်ရယ်၊ အားလုံး အတူတူနေကြတယ်။ နေ့လယ်ဆိုရင် အိမ်ရှေ့က ဆိုင်လေးမှာ မမသဲနေတယ်။
မမသဲတို့နဲ့ စခင်တာက သူ့ဆိုင်သွားသွားထိုင်ရင်းနဲ့ခင်တာ။ ပြောရရင် ကျနော်က ၁၀တန်း၊ ၁၆ နှစ်ဘဲရှိသေးတာ။ နောက်ပြီး လူကောင်က လည်း သေးသေးညှက်ညှက် နဲ့ ကြည့်လိုက်ရင် ဘာမှမသိတဲ့ကလေးငယ်ပုံ။ တကယ်လည်း ဘာမှသိပ်မသိ သေးပါဘူး။ မိန်းမဆိုရင် ကျောင်းမှာ ရန်ဖြစ်ဖို့လောက်သိတာ။ နေ့လယ်နေ့ခင်း ကျောင်းကပြန်လာရင် ကျနော်က မမသဲတို့ဆိုင်မှာ သွားထိုင်ပြီး ဆိုင်မှာရှိတဲ့ ကာတွန်းစာအုပ်တွေနဲ့ စာစောင်တွေကို အမြဲဖတ်နေကျ။ မမသဲကလဲ ကျနော့ကို တော်တော်ချစ် ပါတယ်။
မမသဲက အသက်က၂၈ နှစ်လောက်ရှိပီ။ သူ့သားလေးက ၅ လသားလောက်ရှိမယ်။ နေ့ခင်း မမသဲ ဆိုင်ထဲရှိနေချိန်ဆိုရင် အိမ်မကြီးမှာ အဖွားနဲ့နေတာ။ နို့စို့ချိန်ရောက်မှ မမသဲဆီခေါ်လာပြီး နို့တိုက်ခိုင်းတာ။ အဲဒီတော့ဆိုင်မှာက ဈေးဝယ်မဲ့လူမလာရင် ကျနော်နဲ့ မမသဲဘဲ ရှိကြတာလေ။ ကျနော်က စာအုပ်ဖတ် မမသဲက စကားတော့ တပြောပြော နဲ့ပေါ့။ အဲ့လိုနေလာရင်းနဲ့ တနေ့မှာ မမသဲက
“အာ၊ မမသဲကလည်း၊ မရှိပါဘူးဗျ”
“နင် ကောင်မလေးတွေနဲ့ ရည်းစား မထားချင်ဘူးလား”
“ဟင်း ဟင်း ဟင်း ငါ့မောင်က မသိသေးခင်တော့ ပြောထားဦးပေါ့၊ နောက်မှရည်းစားတွေထည်လဲ ဖြစ်နေမှာမြင်ရောင် သေးတယ်”
တခါတခါမှာ မမသဲက သူ့သားလေးကိုနို့တိုက်ရင် ကျနော့ရှေ့မှာ ပေါ်တင်ကြီး သူ့နို့ကို လှန်တိုက်တတ်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဒီအတိုင်းဘဲ ကြည့်နေလိုက်တာဘဲ။ မမသဲနို့ကတော့ မြင်ရလွန်းလို့ရိုးနေပါပီ။ တခါဆို မမသဲက နို့တိုက် နေရင်းနဲ့
“ နင်ရော နို့စို့ဦးမလား”
“အင်၊ မစို့ချင်ပါဘူး၊ ရွံစရာကြီး”
“အံမာ၊ ဘာရွံစရာရှိလို့လဲ။ ချိုချိုလေးဟဲ့”
“ဟဲ့၊ မဟုတ်ရင် ဒီကလေးတွေစို့မလား။ သူတို့က ပိုတောင်အရသာသိသေးတယ်။ ရော့ နည်းနည်းလေး မြည်းကြည့်”
ဆိုပြီး သူ့လက်ညှိုးနဲ့ နဲနဲယူပြီး ကျနော်မြည်းဖို့ ကျနော့နှုတ်ခမ်းပေါ်တင်ပေးပါတယ်။
“ကဲ၊ ဘယ်လိုလဲ၊ ချိုရဲ့လား”
“အင်းချိုတယ်၊ မမသဲ ရ၊ ကောင်းတယ်၊ အရသာရှိတယ်”
“အင်း၊ စို့မယ်လေ၊ ဒါပေမဲ့ လူတွေမြင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ကလေးနို့ လုစို့တယ် ပြောနေဦးမယ်”
“ဟဲ့လူတွေမြင်လို့တော့ဖြစ်မလားဟဲ့၊ မိုးမီးလောင်မှာပေါ့၊ နေဦး၊ ငါကလေးသွားထားလိုက်ဦးမယ်”
မမသဲက ကလေးကို အိမ်မကြီးပေါ် ပြန်ပို့ပြီးပြန်လာတော့
“ကဲလာ၊ အခန်းထဲသွားရအောင်၊ အထဲမှာ လူမမြင်အောင်စို့”
ဆိုပြီးဆိုင်နောက်ဘက်က နေ့လည်နေ့ခင်း ခဏနားရင်း အိပ်ဘို့ ကန့်ထားတဲ့ အခန်းလေးထဲကျနော့ကို ဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။ အထဲရောက်တော့
ဆိုပြီး သူအပြင်ပြန် ထွက်ပြီးတော့ ကျနော့ဘိနပ်ကို အခန်းထဲ ယူသွင်းလာပါတယ်။ ပြီးတော့ အခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီး သူ့အကျီ ကိုလှန်တင်လိုက်ပြီး
“ရော့ စို့၊ အ၀ စို့”
လို့ပြောပါတယ်။ ကျနော်လည်းဒီအတိုင်း မတ်တတ်ကြီးဘဲ နဲနဲလေးကုံးပြီး သူ့နို့ကို စို့လိုက်ပါတယ်။ သူ့နို့က ကလေးစို့နေတော့ နို့ရည်တွေနဲ့တင်းပြီး တော်တော်ကြီးပါတယ်။ နို့သီးခေါင်းကလည်းမဲပြီး လက်ညှိုးလုံးလောက် ရှိပြီး လက်အစစ် တဝက်လောက်ရှည်ပါတယ်။ ကျနော်က ဘယ်ဘက်နို့ကိုစို့နေတုံး သူက ကျနော့ညာလက်ကိုဆွဲယူပြီး သူ့ညာဘက်နို့ပေါ် တင်ပေးပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့ အဆင်သင့်သလိုဘဲ သူ့နို့ကြီးကို ပွတ်ပေး နေလိုက်ပါတယ်။ စို့နေတဲ့နို့ကလည်း နို့ချိုချို တွေအများကြီးထွက်ပါတယ်။ သူက ကျနော့ခေါင်းကို ကိုင်ထားပြီး ပါးစပ်က တအင်းအင်း နဲ့ညည်းနေပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကကျနော် တကယ့်ကို ဗိုက်အဝ နို့စို့လိုက်ရပါတယ်။ သူ့နို့က ချိုပြီးအရသာ တော်တော်ရှိပါတယ်။ မမသဲက
“အင်း၊ ကောင်းတယ်၊ နောက်နေ့လဲ တိုက်ဦးနော်”
“ငါ့သားလေးစို့ပြီးလို့ ရှိရင် နင့်ကိုတိုက်မယ် နော်”
“အင်း၊ ကျနော်တအားစို့တော့မမသဲ မနာဘူးလား”
“မနာပါဘူး၊ နို့စို့ခံရတာ အရသာရှိတယ်ဟဲ့၊”
“ကျနော်က နို့ဆိုတာ ကလေးတွေဘဲ စို့တယ် မှတ်နေတာ”
“ဘယ်ကလာ၊ ကလေးတွေက နို့ထွက်တဲ့ နို့ကိုဘဲစို့တာ၊ လူကြီးတွေက နို့ထွက်ထွက် မထွက်ထွက် စို့တာဟဲ့”
“ဟလား၊.. မမသဲ ကျနော်အမနို့စို့တာသူများတွေသိရင် ပြသနာတက်မှာလား”
“အောင်မလေး၊ ငါ့မောင်ရယ်၊ ပြသနာ ဘယ် က မလည်း၊ မိုးမီးလောင်ပြီး ငါတို့လင်မယားကွဲမှာဟဲ့၊ ဒါဘဲနော် နင် ငါ့နို့စို့တာ ဘယ်သူမှ လျောက်မပြောနဲ့နော်”
“အင်းပါ၊ မပြောပါဘူး၊ ဒါနဲ့ ခုနက ကျနော်နို့စို့နေတုံး မမသဲ တဟင်းဟင်းဖြစ်နေတာ ဘာလို့လဲ”
“အော်၊ နင်ကလဲ၊ ကောင်းလို့ပေါ့ဟဲ့”
“မမသဲသားလေးစို့တုံးကတော့၊ အဲ့လိုမဖြစ်ပါဘူး၊ မကောင်းလို့လား ”
“မတူဘူးဟဲ့၊ ကလေးစို့တာနဲ့လူကြီးစို့တာ ဘယ်တူမလဲ၊ နင်ကော ငါ့နို့စို့နေတုံး ဘာမှမဖြစ်ဘူးလား”
“အန်၊ ဘာဖြစ်ရမှာလဲ၊ ဒီလိုဘဲ ချိုချိုလေးနဲ့ အရသာရှိတယ်လေ။”
“အင်းပါ၊ နင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တခြားကောင်းတာတွေ သိလာမှာပါ၊ ခုတော့ အားရှိအောင် နို့ဘဲသက်သက်စို့နေဦး”
“ဒါဘဲနော်၊ မမသဲ မနက်ဖြန်လဲ စို့ဦးမယ်နော်”
ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့တွေမှာလည်း မမသဲနို့ကို မကြာမကြာ စို့ဖြစ်နေပါတယ်။ တနေ့တော့ မမသဲက နို့တိုက်နေရင်းနဲ့ ကျနော့ လီးကို သူ့လက်နဲ့ အသာလေး စုတ်ကိုင်ပြီး နယ်ပေးပါတယ်။ အရသာရှိတာနဲ့ ကျနော်လည်းငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ မမသဲက ကျနော့လီးကို ဂွင်းတိုက်ပေးပါတယ်။
“အင်း၊ အရမ်းကောင်းတာဘဲ မမသဲရာ”
“အေး၊ နင် ငါ့နို့ကိုကောင်းကောင်းစို့ပေးလို့ နင့်ကိုလုပ်ပေးတာ၊ နင်ကော အရင်က ဒါမျိုး ဂွင်းထုဘူးလား”
“အော်၊ ကိုတတ်ပ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှန်းပီးထုတာလည်း”
“ဘာလို့မှန်းရမှာလည်း မမသဲရ၊ ဒီလိုဘဲ ထုလို့ကောင်းလို့ထုတာဘဲဟာ”
“အင်၊ နင့်ကိုဘယ်သူက သင်ပေးတာလည်း”
“သင်စရာမလိုပါဘူး၊ ဒီလိုဘဲ ယားလို့ လုပ်ရင်းနဲ့ တတ်သွားတာ။”
“ကဲလာ၊ နင်ကုတင်ပေါ်လာထိုင်၊ ငါ ဒီထက်ကောင်းအောင် လုပ်ပေးမယ်”
အဲဒီလိုပြောပြီး ကျနော့ကိုကုတင်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းပြီး သူက ကုတင်အောက်မှာ စောင့်ကြောင့် ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့လီးကို သူ့ပါးစပ်နဲ့ စ စုပ်ပေးပါတော့တယ်၊ ကျနော့မှာလည်း အရသာရှိလွန်းလို့ ထွန့်ထွန့်လူးနေပါတော့တယ်။ ကျနော့ လီးကလဲ မာတောင်နေပါတယ်။
“ဟဲ့နင့် ဟာကလည်းမသေးပါလား၊ လူကောင်ကသာ သေးတာ ပစ္စည်းကတော့ တော်တော်တုတ်တာဘဲ၊ ”
အဲ့လိုပြောပြီး ကျနော့လီးကို အပီအပြင် စုပ်ပေးတာ ကျနော့မှာ ထွန့်ထွန့်လူးပြီး ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် ဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုကောင်း မှန်းမသိကောင်းလွန်းပြီး လရေတွေ
မမသဲ ပါးစပ်ထဲကို ပန်းထွက်သွားပါတယ်။ မမသဲက ကျနော့ရဲ့ လရေတွေကို မထွေးထုတ်ဘဲ မြိုချပစ်လိုက်ပြီး၊
“နင်ကလည်း၊ လရည်ထွက်လိုက်တာ၊ အများကြီးဘဲ”
“ကျနော် အရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဂွင်းထုတုံးက အဲသလောက် မထွက်ဘူးဗျ”
“အေးပေါ့၊ ကိုယ့်ဘာသာ ထုတာနဲ့တော့ ဘယ်တူပါ့မလဲ၊ အခု အရမ်းကောင်းတယ်မို့လား”
“အင်း၊ ဟုတ်တယ်၊ ကောင်းမှကောင်းဘဲ”
“ဒါနဲ့နေပါဦး၊ နင် ငါတို့မိန်းမတွေရဲ့ဟာကော မြင်ဘူးလား”
“ပုံတွေထဲမှာတော့မြင်ဘူးတယ်၊ အပြင်မှာတော့ မမြင်ဘူးဘူး”
“ကြည့်မလား၊ ကြည့်ချင်ရင် မမသဲဟာ ပြမယ်လေ”
မမသဲက ကုတင်ပေါ်တက်ထိုင်ပြီး သူ့ထမီကို အောက်ကိုဖြည်ချလိုက်တော့ သူ့ဟာကြီး ပေါ်လာပါတယ်။ ကျနော်လည်းကုတင်အောက်မှာ သူခုနကထိုင်သလိုထိုင်ပြီးသူ့ဟာကြီးကို သေသေချာချာလေ့လာလိုက်ပါတယ်။ သူ့ဟာကြီးက ဖေါင်းဖေါင်းကြီးနဲ့ ပြောင်ရှင်းနေတာဘဲ။ အမွှေးလဲ တပင်မှမရှိဘူး။
“ဟေ့အေး၊ မပေါက်ဘူးဟဲ့၊ နင် ကိုင်ကြည့်ချင် ကိုင်ကြည့်လေ”
ကျနော်လည်း သူ့ဟာကြီးကို အသာလေး ပွတ်ကြည့်လိုက်တော့ မမသဲက တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။
“ယားလို့ဟ၊ ရတယ် ဆက်လုပ်။ နင့်သဘောရှိသာလုပ်၊ ရတုံးလေး သေသေချာချာ လေ့လာထား၊ ”
“မမသဲဟာကြီးက ကိုင်လို့ကောင်းတယ်ဗျ၊ အိနေတာဘဲ၊ ဒီအလယ်ကဘာလေးလဲ”
“အဲ့ဒါ စောက်စေ့ပေါ့ဟဲ့၊ အဲဒါလေးကို သေသေချာချာ ကိုင်ပြီးပွတ်ပေး၊ အရသာရှိတယ်”
“အင်း မမသဲဟာကြီးကလည်း အရည်တွေနဲ့ ရွဲနေတာဘဲ”
“အဲဒါ နင်ကိုင်ပေးနေလို့ ကောင်းနေလို့ ထွက်တာပေါ့၊ နင့်ကိုငါလုပ်ပေးသလို ငါ့ကိုလည်းနဲနဲ လုပ်ပေးပါလား”
“ဟိုလေ၊ နင့်လျာနဲ့ ငါဟာကိုနဲနဲယက်ပေးပါလား”
အဲလိုပြောပြီး သူက ကုတင်ပေါ်ကို လှဲချလိုက်ပါတယ် ကျနော်လည်း သူပြောသလို ယက်ပေးဘို့ သူ့ဟာကြီးအနားကို တိုးလိုက်ပါတယ်။ ပြောရရင် ကျနော်က သိပ်ပြီးတော့ မရွံတတ်ဘူးဗျ။ နောက်ပြီးတော့ သူ့ဟာကလည်း မနံဘူးလေ၊ မမွှေးပေမဲ့ သိပ်မဆိုးလှတဲ့ အနံ့သင်းသင်းလေးတော့ ရှိတယ်။ ကျနော်က သူ့ အဖုတ်ကို အပြားလိုက် ယက်လိုက်တော့ သူလည်းတွန့်ကနဲဖြစ်သွားပြီး ကျနော့ခေါင်းကိုလက်နဲ့ လှမ်းကိုင်ထားတယ်။ ကျနော်က ဆက်တိုက်ကလေး အထက်အောက် ယက်ပေးလိုက်ပြီး၊
ကျနော်ကအောက်ကနေ အပေါ်ကို ပင့်ယက်လိုက်တော့ သူ့အဖုတ်က အာလာပြီး ကျနော့လျာက အဖုတ်နှစ်ခမ်းနှစ်ခု ကြားထဲ ၀င်သွားပါတယ်။ အဲဒီကြားထဲမှာစောက်ရည်တွေနဲ့ ရွဲနေတော့ ကျနော့ပါးစပ်ထဲလည်း ဝင်ကုန်တာပေါ့။ ထူးခြားတာက စောက်ရည်ရဲ့ အရသာက ချိုချိုလေးဗျ။ ကျနော်လည်းအရသာမဆိုးတာနဲ့ ပါးစပ်ထဲဝင်လာတဲ့စောက်ရည် တွေကို မြိုချလိုက်တာဘဲ။ အဲ့လို အဖုတ် အကွဲကြောင်းထဲကိုယက်ရင်း ယက်ရင်း နဲ့ ဟိုး အခေါင်းအထဲထိ လျာ ၀င်နိုင် သလောက်ကို ထိုးထိုးထည့်ပေးတော့မမသဲမှာ ထွန့်ထွန့်လူးနေပါတော့တယ်။
“ကောင်းလိုက်တာ…ကောင်းလိုက်တာ ငါ့မောင်ရယ် ….အီး…..ရှီး… ရှီး…ကောင်းလိုက်တာ….အား…..”
ကျနော်ကလည်း အဲလိုစုပ်ပေးနေရင်းနဲ့ သူ တွန့်တွန့် သွားတဲ့နေရာတွေကို မှတ်ထားပြီး အဲဒီနေရာတွေကို ပို ဦးစားပေးပြီး စုတ်ပေး ယက်ပေးပါတယ်။ သူ့ အစေ့ကိုများစုတ်ပေးလိုက်ရင် သူ့မှာ တ အ အ နဲ့ သူ့ဖင်ကြီးက အပေါ်ကို ဆပ်ကနဲ ဆပ်ကနဲ မြောက်ကြွ မြောက်ကြွ ဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ယက်နေရင်းနဲ့ လျာဖိအားနဲနဲလျော့သွားတာနဲ့ မမသဲက ကျနော့ ဆံပင်ကိုဆုပ်ဆွဲပြီး သူ့အဖုတ်နဲ့ အတင်းဆွဲကပ်ထားပါတယ်။ နဲနဲကြာလာတော့ ကျနောလဲ လျာကော မေးကော နဲနဲ ညောင်းလာပါတယ်။
“မမသဲရေ၊ ညောင်းပြီဗျာ၊ တော်တော့မယ်နော်”
“အင်၊ ခဏလေး၊ ခဏလေး၊ ခဏလေးပါ ငါ့မောင်ရယ်။ မရပ်လိုက်ပါနဲ့ဦး၊ ပြီးခါနီးနေပီ၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးစုပ်ပေး ယက်ပေးပါဦးနော်၊ ”
ကျနော်လည်း သူပြောသလိုဘဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်း စုပ်ပေး ယက်ပေးလိုက်တာ ခဏနေတော့ မမသဲ တကိုယ်လုံး ဆန့်ငင် ဆန့်ငင်ဖြစ်ပြီး သူ့အဖုတ်ထဲက အရည်ကြည်တွေပန်းပန်းထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီအရည်တွေက ကျနော့မျက်နှာကို ပန်းတာ ပေါ့၊ ကျနော်လည်းမျက်စေ့ထဲမဝင်အောင် မှိတ်ထားရပါတယ်။ အဲဒီလို စောက်ရည်တွေ ပန်းထွက်ပြီး မမသဲက သူ့ပေါင် ကို တအားဆွဲစေ့ပြီး ကျနော့ခေါင်းကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ကွေးကွေးလေးအိပ်ပြီး အသက်ကိုပြင်းပြင်း ရှူနေ ပါတယ်၊ မျက်လုံးကိုလည်းစုံမှိတ်ထားပါတယ်။ တခါတခါမှာသူ့ကိုယ်လုံးက ဆပ်ကနဲ၊ဆပ်ကနဲ လည်း တုံ တုံနေပါတယ်။ ကျနော်လည်း စိုရွဲနေတဲ့ ကျနော့မျက်နှာ ကို သူ့ထမီနဲ့ပဲ သုတ်လိုက်ပြီး သူ့ကိုဘဲ ထိုင်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ ၅ မိနစ် လောက်ကြာတော့မှ အမ အသက်ရှူပုံ မှန်လာပြီး မျက်လုံးကိုမှေးမှေးလေး ဖွင့်ကြည့်ပါတယ်။ ပြီးတော့
“ဟင်း………ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရယ်။ မင်းလုပ်ပေးတာကတော့ ရှယ်ဘဲ၊”
အဲလိုနဲ့ ကျနော်နဲ့ မမသဲတို့ မကြာကြာ
မရိပ်မိကြဘဲ တော်တော်ကြာကြာအဆင်ပြေနေကြပါတယ်။ ကျနော့ဆိုက်နဲ့ ဂိုက်ကလည် ထင်စရာမရှိဘူးလေ။ တနေ့တော့မမသဲက တဆင့်တက်ပြီး
“ ငါ့မောင်ကို သင်ခန်းစာ အသစ်တက်ပေးမယ်”
“သူများတွေ လိုးတာ နင်မြင်ဘူးလား”
“ဟို…မမသဲစောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို ကျနော့လီး ထိုးထည့်ရတာ မို့လား”
“ဟိုလေ၊ ပြီးတော့ လီးကို ထည့်လိုက် ထုတ်လိုက် လုပ်ရတာလေ”
“အမယ်၊ ကောင်လေးက မဆိုးဘူး၊ သိသားဘဲ၊ ဘယ်သူပြောပြတာလည်း”
“ဟဲ့၊ နေဦး၊ နင့်သူငယ်ချင်းတွေကို ငါ့နဲ့
“အာ၊ မပြောပါဘူး၊ မမသဲကလည်း၊ ပြောစရာလား”
“အေးနော်၊ လျောက်မပြောနဲ့၊ နှစ်ယောက်စလုံး ပြသနာတက်ကုန်မယ်၊”
“နေဦးဟဲ့၊ ခဏနေရင် အမေတို့ အလှူသွားစရာရှိတယ်၊ ငါ့သားလေးကိုလည်း ခေါ်သွားမှာ၊ နင် ခု အိမ်ခဏ ပြန် ပြီးရင် နင့်အိမ်ကို တခုခုအကြောင်းပြပြီး နာရီဝက်လောက်နေရင် ပြန်ထွက်လာခဲ့၊ ပြီး ငါတို့အိမ်ထဲက သွားစောင့်နေ၊ သိလား၊ မဝင်ခင် လမ်းပေါ်မှာလူရှင်း မရှင်း ကြည့်ပြီးမှဝင်ဦး၊ တော်ကြာ လူမိနေဦးမယ်”
ကျနော်လည်း အိမ်ပြန်ပြီး ခဏကြာတော့ အိမ်ကိုလမ်းထိပ်ခဏဆိုပြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ မမသဲတို့ ဆိုင်ကိုလှမ်းကြည့်တော့ ပိတ်ထားတယ်၊ မမသဲလည်း အိမ်ထဲရောက်နေပြီထင်ပါတယ်၊ ကျနော် သူတို့အိမ်ရှေ့ ရောက်တော့ လမ်းထဲက လူတယောက်ထွက်လာလို့ မသိမသာနဲ့ လမ်းထဲဘက်ကိုလျောက်လိုက်ပါ တယ်၊ သူ တော်တော်လှမ်းသွားတော့မှ ပြန်လှည့်ပြီး လူလစ်တော့ မမသဲတို့ခြံထဲကို ပြေးဝင်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်ရှေ့ရောက် တော့ အိမ်တံခါးကဖွင့်ထားတာနဲ့ အိမ်ထဲကို တန်းဝင်လိုက်ပါတယ်။ မမသဲက အိမ်ထဲမှာ အဆင်သင့်စောင့်နေပါတယ်။ မမသဲက ထုံးစံအတိုင်း ကျနော့ဘိနပ်ကို မမေ့မလျော့အိမ်ထဲသွင်းလိုက်ပြီး အိမ်တံခါးကို ပိတ်လိုက်ပါတယ်။
“ဟဲ့၊ နင်ဝင်လာတာ ဘယ်သူမှ မမြင်တာ သေချာတယ်နော်”
“မမြင်ပါဘူး မမသဲရဲ့၊ လူတယောက်လာတာ တွေ့လို့တောင် ကျနော်လမ်းထဲဘက် လမ်းလျောက်လိုက်ရသေးတယ်”
“အေးပါ၊ မြင်ရင်တောင်မှ နင့်ဆိုက်နဲ့ ဘယ်သူမှ တမျိုးထင်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ငါတခုခု ခိုင်းဘို့ ခေါ်တယ်ဘဲထင်ကြမှာ”
“အင်းလေ၊ ခုလည်း မမသဲတခုခု ခိုင်းဘို့ ခေါ်တာဘဲဟာကို”
“ခိုင်းဘို့မဟုတ်ဘူး၊ နင့်ကို ပညာသင်ပေးဘို့ခေါ်တာ၊ လာ လာ ပြောနေကြာတယ်၊ သင်ခန်းစာ စမယ်”
မမသဲက ကျနော့ကို သူတို့လင်မယား အိပ်တဲ့အခန်းထဲဆွဲခေါ်သွားပြီး အထဲရောက်တော့ သူ့အင်္ကျီရော ထမီကိုပါ ချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့ ပုဆိုးကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး တဆက်ထဲ ကျနော့တီရှပ်ကိုပါ မ ချွတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ငုတ်တုတ်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ကျနော့လီးကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီး စ စုပ်ပါတော့တယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော့ လီးလဲ ပျော့ရာကနေ မာလာပါတယ်။ မမသဲကလည်း လီးစုပ်ရတာကိုတော်တော်ကြိုက်ပုံရပါတယ်။ ပယ်ပယ်နယ်နယ် စိတ်တိုင်းကျ တော်တော်
“ကဲ နင်လည်း ငါ့ကိုတလှည့် စုပ်ပေးဦး”
လို့ပြောပြီး ကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်ပါတယ်၊ ဆိုင်ပေါ်မှာတုံးကလိုဘဲ ကိုယ်လုံးက ကုတင်ပေါ်မှာ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းက အောက်မှာ တွဲလောင်းကျလို့ပေါ့၊ ကျနော်လည်း သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကြား ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်း ကို ပေါင်ကနေ မတင်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့လိုမတင်ပြီးပေါင်ကို ကားကားလေးဖြဲလိုက်တော့ သူ့စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက ပြူထွက်လာပါတယ်။ ကျနော်လည်း အရင်တုံးကလို သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို စပြီးယက်လိုက် စောက်စေ့စုပ်လိုက်နဲ့ လုပ်ငန်းစပါတော့တယ်။ ဒီအဆင့်ထိက ကျွမ်းကျင်ပြီးသားဆိုတော့ သင်စရာမလိုဘဲ အပီအပြင် အသုံးတော်ခံလိုက်ပါ တယ်။ မမသဲကလည်း တော်တော်လေးအရသာခံပြီးမှ
“ကဲ ထ၊ ကိုယ်တော်လေး၊ သင်ခန်းစာ အသစ်တယ်မယ်”
လို့ပြောပါတယ်။ ကျနော်လည်း မတ်တတ်ထရပ်လိုက်တော့
“နင့်လီးကို သေသေချာချာကိုင်ပြီး ငါ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို အမြှောင်းအတိုင်း အပေါ်အောက် ပွတ်ဆွဲပေး”
ကျနော်က သူပြောသလို ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်တော့
“အား၊…ရှီး…. ကောင်းတယ်၊ ဖိဆွဲပေး၊ အထဲ မထည့်နဲ့ဦး၊ ဒီလိုဘဲ နာနာလေးဖိဆွဲပေးနေ”
ကျနော်လည်း သူ့အမိန့်အတိုင်း လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူက သူ့ဖင်ကြီးကို အပေါ်ကိုကော့ကော့ပြီး ထိုးတင်ပေးပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကလည်း စောက်ရည်တွေနဲ့ ရွဲရွဲစိုနေပါပီ။ ဒီလိုနဲ့ ခဏလောက်ကြာတော့မှ
“ကဲရပြီ၊ အထဲကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း ထိုးထည့်”
ကျနော်က မမသဲအမိန့်အတိုင်း လိုက်နာပြီး ကျနော့လီးကို သူ့စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ စောက်ဖုတ်က အရည်တွေ ရွဲနေပေမဲ့ တကယ်သွင်းတော့ ကြပ်တပ်တပ် ဖြစ်နေပါတယ်။ မမသဲက
“ငါပြောတယ်မို့လား နင်းလီးက အလုံးတုတ်ပါတယ် ဆို၊ နဲနဲ အားစိုက်ပြီးဖိ သွင်းလိုက်”
ကျနော် သူပြောသလို ဖိသွင်းလိုက်တော့မှ လီးက လျောကနဲဝင်သွားပါတယ်၊
“အင်း…….ရပြီ၊ ခု တဝက်လောက် ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်ပေး၊ အင်း…အဲ့လိုမျိုး.. ကောင်းတယ်၊ ကောင်းတယ်.. ဆက်လုပ်၊ ရှီး….. အ…သွက်သွက်လေး၊ သွက်သွက်လေး…. အေး…… အဲလိုမျိုး၊ အဲလိုမျိုး.. အား..ကောင်းလိုက်တာ…. ကောင်းလိုက်တာ…မောင်လေးရေ၊ စောင့်စောင့်ပြီး သွင်းပေးစမ်း၊ အင်း..စောင့် စောင့်၊ နာနာ စောင့်၊ အားထည့်ပြီးစောင့် ပါဟဲ့၊ အသားကုန်၊ အသားကုန် စောင့် နဲနဲလိုသေးတယ်၊ နင့်လီးကနဲနဲတိုတယ်၊ လာ၊ ပုံစံတမျိုးပြောင်းရအောင်”
မမသဲက ပြောပြောဆိုဆို နောက်ဆုတ်လိုက်တော့ ကျနော့လီးကပြွတ်ကနဲထွက်လာပါတယ်၊ မမသဲက ကုတင်အောက် ကိုဆင်းလိုက်ပြီး ကျနော့ကို ကျောပေးလိုက်ပါတယ်၊ ပြီတော့ ကုတင်ပေါ်ကို မှောက်အိပ်ချလိုက်ပါတယ်၊ သူ့ကိုယ်လုံးက ကုတင်ပေါ်မှာ ခြေထောက်တွေကအောက်မှာ၊ ပြီးတော့ သူ့ခြေထောက်တွေကို ကားလိုက်ပါတယ်၊
“အန်၊ ဘယ်ထဲသွင်းရမှာလည်း၊ အမဖင်ထဲလား”
“ဟဲ့၊ ဘယ်ဖင်ထဲသွင်းရမှာလဲ၊ သေသေချာချာကြည့်လေ၊ စောက်ခေါင်းကြီး မမြင်ဘူးလား”
“အင်း၊ မြင်ပီ၊ မြင်ပီ”
ဟုတ်ပ၊ သေသေချာချာကြည့်တော့မှ ဖင်ကုန်းလိုက်ရင် စောက်ဖုတ်ကြီးက နောက်ကို ပြူထွက်လာပြီး အပေါက်ကိုပါ ပီပီပြင်ပြင် မြင်ရတယ်ဗျ၊ အခုလေးတင်လိုးထားတာဆိုတော့ စေ့မနေဘဲ နဲနဲလေးဟနေပါတယ်။ စောက်ခေါင်း အထဲက ပန်းရောင်အသားနုနုလေးကိုတောင် မြင်နေရပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဘာမှထပ်ပြောမနေတော့ဘဲ ကျနော့လီးကို သူ့စောက်ခေါင်းထဲထိုးထည့်ဘို့ ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးက ကျနော့ခါးနားထိ ရောက်နေတော့ ကျနော့မှာ ခြေဖျားထောက်ပြီး သွင်းတာတောင် ကောင်းကောင်းမဝင်ချင်ပါဘူး။
“မရဘူးဗျ၊ မမသဲ ဖင်ကြီးကို အောက်နဲနဲ နှိမ့်ပေးဦး”
“အော်၊ ဟုတ်သားဘဲ၊ ကဲ၊ မီပီလား ခုကြည့်”
မမသဲက သူ့ခြေထောက်တွေကို ခပ်ကားကားလေး ချဲလိုက်ပြီး ဒူးနဲနဲကွေးပေးလိုက်တော့မှ သူ့ဖင်နဲ့ ကျနော့ လီးနဲ့တတန်းတည်းဖြစ်သွားပါ တယ်။
“ရပီ မမသဲ မီပီ”
အဲဒီတော့မှ ကျနော့လီးကို သူ့စောက်ခေါင်းထဲ သေသေချာချာ သွင်းလို့ရသွားပါတယ်။ ကျနော်လည်း လီးကို တဆုံးသွင်းပီး ခုနကလို ဆက်လိုးပါတော့တယ်၊
“အင်း…အား…အီး… ခုမှဘဲ ထိတော့တယ်၊ လိုး မောင်လေး လိုး၊ ကောင်းမှကောင်း၊ ခပ်ပြင်းပြင်းလေး စောင့်လိုးပေးနော် မညှာနဲ့”
မမသဲ ပြောသလို ခပ်ပြင်းပြင်းလေး တော်တော်ကြာကြာလိုးလိုက်တော့ ကျနော်လည်း နဲနဲပီးချင်လာပါတယ်၊ ဒါကိုမမသဲက သိပုံရပါတယ်၊
“မောင်လေး မပြီးနဲ့ဦးနော်၊ ပြီးချင်ရင် အရှိန်နဲနဲလျော့ပြီး ၁ ၂ ၃ ၄ ရေနေလိုက်၊ စိတ်ကတခြား မဆိုင်တာတွေ လျောက်စဉ်းစားနေလိုက်”
သူပြောသလို ကျနော် လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ပြီးချင်စိတ် ပြောက်သွားတယ်၊ အဲ့လိုနဲ့ ပြီးချင်လာလိုက် ၁ ၂ ၃ ၄ ရေလိုက် အသားကုန်စောင့်လိုးလိုက်၊ နဲနဲပြီးချင်လာလိုက် တခြားလျောက်စဉ်းစားလိုက်နဲ့ လိုးလိုက်တာ ကျနော့ စိတ်ထင်တော့ တနာရီလောက်ရှိမလား မသိဘူး (စိတ်ထင်ပြောတာပါ) လူကလည်း ချွေးကရေနဲ့လောင်းထားသလိုဖြစ်နေပီ၊ မမသဲလည်းအောက်ကနေ အသားကုန် အသံမျိုးစုံပေးနေပါတယ်၊ ဒီတခါပြီးချင်သလို ဖြစ်လာတော့ ကျနော်လည်း ခုန ကလို မထိန်းတော့ဘဲ အသားကုန် တဖုံးဖုံး ပစ်စောင့်လိုးပြီး ကျနော့လရည်တွေ မမသဲစောက်ဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်ပြီး ပီးလိုက် ပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ ကျနောလည်း ရပ်တောင်မရပ်နိုင်တော့ဘဲ မမသဲဘေးမှာ ပစ်လှဲချလိုက်ပါတယ်။ မမသဲကတော့ သူ့လက်ရှိပုံစံကို မပြင်နိုင်တော့ဘဲ ဒူးလေးကိုကွေးလိုက်ပြီး ဒီအတိုင်းလေးဘဲ ဆက်အိပ်နေပါတယ်။ ၁၀ မိနစ် ၁၅ မိနစ် လောက်ကြာတော့မှ နှစ်ယောက်သား စကားပြန်ပြောနိုင်ကြပါတော့တယ်။
“ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရယ်၊ မင်းကတော့ တကယ့်ကို ရှယ်ဘဲ၊ မင်းလိုကြာကြာ ဘယ်သူမှ မလိုးနိုင်ဘူး သိလား၊ မင်းက တခါမှသာ မလိုးဘူးတာ၊ လိုးလိုက်တော့လည်းဆရာကြီးဘဲ”
“ဒါက၊ ကျနော့ဆရာမက အသင်ကောင်းတာကိုးဗျ၊ ဒါတောင် ကျနော့လီးကတိုလို့ မမသဲ အားမရဘူးမို့လား”
“အင်…ရတယ် ရတယ်၊ တိုတော့ နောက်ကလိုးတာ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ၊ ရှည်ရင် ခုလိုစောင့်လိုးရင် နာမှာ၊ ဒါကလည်း မင်းကငယ်သေးတာကိုး၊ နောက်ဆိုဒီထက် အများကြီးရှည်ဦးမှာ၊ စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့ သိလား”
“အမလေး၊ ရှည်ဦးမှာ၊ အဲဒီတော့မှ တဆုံးမခံနိုင်လို့ ချန်လိုးနေရဦးမယ်”
“မမသဲကတော့ ဆရာမကြီးဘဲ၊ ”
“နင်ရော ဘယ်လိုလဲ။ လိုးရတာကောင်းလား”
“အာ ကောင်းမှကောင်း၊ နောက်လဲ အမြဲလိုးကြမယ်နော်မမသဲ”
“နောက်မဟုတ်ဘူး၊ အခုထပ်လိုးရဦးမှာ၊ ဒီအခွင့်အရေးရတုံး တခါတည်းနဲ့ဖြစ်မလား၊ ထပ်လိုးပေးဦးနော်၊ လိုးနိုင်သေးလား”
“အာ လိုးနိုင်တာပေါ့၊ ကြည့်ပါလား ကျနော့လီးကြီးကို၊ ခုတောင်ပြန်မာတောင်လာပြီ၊ ခုနလိုဘဲ နောက်က လိုးရမှာလား”
“ဘယ်.. နောက်တမျိုး သင်ပေးဦးမှာ၊ ငါ့မောင်ကို လုံးဝ ဆရာကြီးဖြစ်အောင်ကို နည်းမျိုးစုံ သင်ပေးဦးမှာ၊ ”
“အင်း၊ ပြောလေ မမသဲ၊ ဒီတခါ ဘယ်လိုထပ်လိုးရမလဲ”
မမသဲက ကျနော့ကိုပက်လက်ဆွဲလှဲလိုက်ပြီး သူခုနက ချွတ်ထားတဲ့ ထမီနဲ့ကျနော့လီးကို သုတ်ပေးပါတယ်၊ ပြီးတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကိုလည်း သေသေ ချာချာ သုတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့လီးကို စပြီးစုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီတခါက ခုနလိုမဟုတ်ဘဲ သူက ကျနော့အပေါ်ဗျောင်းပြန် ခွပြီးစုတ်တော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးက ကျနော့မျက်နှာနဲ့ တည့်တည့် ဖြစ် နေတာပေါ့၊ မမသဲက
“ နင်လည်း ငါ့အဖုတ်ကိုစုပ်ပေးလေ၊ ဒီပုံစံလုပ်တာကို 69 ပုံစံလို့ခေါ်တယ်၊ မှတ်ထား၊”
မမသဲက ကျနော့လီးကို စုပ်နေသလို ကျနော်လည်း ခုနက ကျနော်လိုးထားတဲ့ အမစောက်ဖုတ်ကြီးကို ပြန်စုပ်ပေးနေ လိုက်ပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်က သေသေချာချာ သုတ်ထားတော့ ချောက်နေပြီး စုပ်စမှာ ဘာအရည်မှ မရှိဘူး၊ စုတ်ပေး နေရင်းနဲ့မှ တဖြည်းဖြည်း အရည်တွေစိမ့်ထွက်လာပါတယ်။ သူ့အရည်တွေလား ခုနကကျနော့ပန်းထည့်ထားတဲ့ ကျနော့ အရည်တွေလားတော့မသိဘူး၊ ကျနော်ကတော့ သူ့ကိုယက်ရင်းစုပ်ရင်းနဲ့ ပါးစပ်ထဲဝင်လာသမျှကိုတော့ မြိုချလိုက်တာဘဲ၊ မမသဲလည်း တဖြည်းဖြည်း ဖီလင်ပြန်တက်လာပြီး သူ့စောက်ဖုတ်နဲ့ ကျနော့မျက်နှာကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းကိုပွတ်နေတော့ ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ပုံစံပြောင်းပြီး ကျနော့ကိုအတင်းဆွဲလှည့် လိုက်တော့ သူက အောက်က ကျနော်က အပေါ်ကဖြစ်သွား ပါတယ်။ ခုနက အပေါ်ကနေ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့ဖိပွတ်နေတာ ကျနော့မေးတောင်းညောင်းလာတယ်၊ သူပုံစံပြောင်းလိုက် တော့မှဘဲ နဲနဲနေသာသွားတယ်။ ဒီတခါတော့ကျနော်က သူ့စောက်ဖုတ်ကို ယက်နေရင်းနဲ့ သူ့ပါးစပ်ကို အခုနကသူ့ စောက် ဖုတ်ကိုလိုးသလိုမျိုး ဖြည်းဖြည်း ဖြည်းဖြည်းနဲ့ လိုးနေလိုက်ပါတယ်။
“မောင်လေး၊ အစေ့ကိုဖိယက်ပေးစမ်း၊ အင်း… အင်း… အဲ့လိုမျိုး၊ အဲ့လိုမျိုး..ယက်ယက်၊ ကောင်းတယ် ယက်၊ အား…အီး…”
ကျနော်ကတော့စကားမပြောနိုင်ဘဲ အလုပ်ကိုဘဲ ဦးစားပေးနေရပါတယ်၊ ကျနော်လည်း တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ယက်လိုက်၊ စုပ်လိုက်၊ စောက်ခေါင်းထဲ လျာ ဝင်သလောက် ထိုးထည့်လိုက် စောက်စေ့ကို နှတ်ခမ်းနှစ်ခုကြားထဲ ဖိကြိတ်ပြီး ချေလိုက်လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူကလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဖီလင်တက်လာပြီး သူ့စောက်ဖုတ်နဲ့ ကျနော့မျက်နှာကို ကော့ ကော့ထိုးလာပါတယ်။ စုပ်နေတဲ့လီးကိုတောင် ဆက်မစုပ်နိုင်တော့ဘဲ ပါးစပ်က တအီးအီး တအအ အသံစုံ စ ထွက်လာပါ တယ်။
“ရှီး….အမလေး…အမေရေ၊ ကောင်းလိုက်တာ… အမလေး ယက်ပါ။ နာနာယက်ပါမောင်လေးရယ်၊ ကောင်းလိုက်တာ…ရှီး”
အဲ့လိုတအားကောင်းနေတုံး သူက ကျနော့ကို အတင်း တွန်းပြီး၊
“မောင်လေး၊ ထ ထ၊ လိုးတော့၊ လိုးတော့၊ မင်းလီးကြီးနဲ့လိုးတော့၊ မြန်မြန်၊ မြန်မြန်”
ကျနော်လည်းအမြန်ထပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးတဆုံးစောင့်ထည့်လိုက်ပါတယ်။
“အား………ကောင်း၊ ကောင်းလိုက်တာ၊ စောင့်စမ်း၊ စောင့်၊ အသားကုန်စောင့်၊ လုံးဝမညှာနဲ့၊ မမသဲ စောက်ဖုတ်ကြီးကွဲသွား ပါစေ၊ နာနာသာစောင့်”
သူပြောသလိုကျနော်လည်း အသားကုန်စောင့်တာ ဗိုက်တောင်နဲနဲ နာလာပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ကျနော်က အရှိန်လုံးဝမလျှော့ဘဲ ဆက်တိုက်အသားကုန် ဆက်စောင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတခါကျတော့ ဘာလို့လဲမသိဘူး ရှေ့ကလိုးတာကိုဘဲကျနော့လီးက သူကစောက်ခေါင်းထဲကို ခုနက ဖင်ကုန်းလိုးသလိုမျိုးတဒုတ်ဒုတ်နဲ့ ထိနေပါတယ်။ မမသဲလည်း သူ့ခြေထောက်ကိုသူ ခြေကျင်းဝတ်က အတင်းဆွဲကပ်ထားပြီး အရမ်းဖီးတက်လာတော့ စောက်ဖုတ်ကလည်းကျနော့ကို အသားကုန်ကော့ကော့ ထိုးနေပါတယ်။ ဒီတခါက ခုနတခါလိုးထားတော့ ချက်ချင်းမပြီးသေးဘဲ အကြာကြီးပိုလိုးနိုင်ပါတယ်။ တော်တော့ကို ကြာ တော့မှ ကျနော်ပြီးချင်လာပါတယ်။
မမသဲကတော့ ဘယ်နှစ်ခါ ဘယ်နှစ်ခေါက် ပြီးနေလည်းတော့ မသိတော့ပါဘူး၊ ကျနော်လည်း အရမ်းပြီးချင်လာတော့ ခုနတခေါက်တုံးကလို မထိမ်းတော့ဘဲ ကျနော့လရည်တွေကို မမသဲ စောက်ဖုတ်ထဲ နောက်တခါပန်းထည့်လိုက်ပြီး ပြီးလိုက်ပါတော့တယ်။ ပြီးလဲပြီးရော မောမောနဲ့ မမသဲ ကိုယ်ပေါ်မှာဘဲ အိပ်နေလိုက်ပါတယ်။ မမသဲကလဲ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူလို့ငြိမ်နေပါတယ်။ ခနလောက်ကြာမှ
“အင်း ငါ့မောင်လေးလဲ တရက်တည်းနဲ့ကို ဆရာဖြစ် အောင်သွားပြီ၊ တော်လိုက်တာ၊”
“ဒါကကျနော့ဆရာမ တော်လို့ပါနော်၊ မမသဲရယ်၊ ကျနော်လေ လိုးရတာကို အရမ်းကြိုက်သွားပီ သိလား၊ နောက်လည်း ကျနော့ကို ပေးလိုးနော်”
“အေးပါ၊အေးပါ၊ ပေးလိုးမှာပါ၊ ငါကလည်း ကိုယ်ကောင်းကောင်း ခံရအောင် နင့်ကို ပညာကုန်သင်ပေးနေတာ၊ နင် မလိုးရင် ငါရှုံးမှာပေါ့၊ ကဲခုတော့ထဦး၊ ”
မမသဲက ကျနော့ကို အသာဘေးတွန်းချပြီး အခန်းပြင်ကို ကိုယ်တုံးလုံးကြီးဘဲ ထွက်သွားပါတယ်။ ပြန်ဝင်လာတော့ သူ့မှာ ရေစိုဝတ်တခုပါလာပြီး ကျနော့ မျက်နှာနဲ့ ရင်ဘတ်ကို ရေပတ်တိုက်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ကျနော့လီးကို အဲဒီရေစိုဝတ်နဲ့ ဘဲ သေသေချာချာ သုတ်ပေးပါတယ်။ သူကျနော့လီးကို သုတ်ပေးနေတုံးမှာဘဲ ကျနော့လီးက ပြန်အသက်ဝင်လာပါတယ်။
“ငါ့မောင်၊ တော်တော့၊ ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ဘဲ၊ နောက်နေ့မှနော်၊ သွား၊ သွား ပြန်တော့”
အဲဒီနောက်မှာတော့ ကျနော်နဲ့ မမသဲတို့ အခွင့်အရေးရတိုင်း မကြာမကြာ
ရောဂါ **** ( စ / ဆုံး )
June 11, 2021 August 1, 2021